> Resource > Video > MOV Player: Sida loo Play MOV Files (QuickTime)
Qaab MOV waa qaab weel warbaahinta QuickTime. Unahay ee isticmaala ayaa weli ku jira mugdi ah oo ku saabsan sida ay Radidiyaha karo ama daawado file MOV video ah. In this article, waxaan soo bandhigi doonaa afar hab oo suurto gal ah in loo maqli karo ee files QuickTime MOV on PC ah Mac ama Windows-ku-saleysan.
Habka 1: Isticmaal Wondershare Player
Habka 2: Isticmaal QuickTime MOV Player
Habka 3: Isticmaal VLC Media Player
Habka 4: Beddelaan QuickTime MOV in Playable qaabab ee Mac / Windows
The Wondershare Player waa ciyaaryahan MOV QuickTime weyn. Waxa ay taageertaa kala duwan oo qaabab video sida MOV, wmv, MKV, M4V, FLV, AVI, AVCHD, MTS, M2TS, VOB, MP3 iyo in ka badan. Sidaas darteed haddii aad dhibaato ku ciyaaro QuickTime files MOV aad ciyaaryahan u gaar ah, kaliya download iyo Wondershare Player hadda isku dayaan. The design oo quruxsan oo dareen leh ma waayi maayo waxaad qabsan iyo isticmaasho ka dib ciyaaryahanka, ma waxaad u baahan tahay in la raadiyo kale ah. Farriinta qalad ah qaabab file in aynan marnaba mar kale ku dhici doono. Ku raaxayso video!
QuickTime waa ciyaaryahan warbaahinta la mid ah Windows Media Player. Waa ciyaaryahan warbaahinta kaliya ee Apple, si users Mac Radidiyaha karo files MOV ee Mac (libaax oo buurta ka mid ah) si aad u wanaagsan iyadoo la isticmaalayo ciyaaryahanka MOV dhisay-in QuickTime. Inta badan dadka isticmaala Windows, ay u badan tahay jeceshahay in aad isticmaasho Windows dhisay-in player- Windows Media Player (WMP). Si kastaba ha ahaatee, WMP ma taageeri qaab file MOV haddii ay updated nidaamka kombiyuutarka si ay u Windows 7. In kasta oo Windows 7 sheegay in ay jirto taageero u files MOV ah, dadka isticmaala qaar ka mid ah ayaa weli aan ku faansheen by natiijada ayaa ka gees. Sidaa darteed, waxaan jeclaan doonaa in ay ku taliyaan version Windows ciyaaryahan QuickTime si ay awood haya'ad ee file MOV ah madal Windows ah.
Hel QuickTime u Win halkan.
VLC media player waa ciyaaryahan kale oo weyn MOV taasi socon labada Mac iyo version Windows. Waxa uu helay in ka badan oo caan ka sii mid ah Mac (libaax oo buurta ka mid ah) iyo Windows users iyadoo taageeraysa kala duwan oo qaabab video sida wmv, MKV, M4V, FLV, AVI, MOV, AVCHD, MTS, M2TS, VOB, MP3 iyo in ka badan . Sidaas darteed haddii dhibaato ku ciyaaro files MOV iyada oo ciyaaryahan u gaar ah aad qabto, kaliya isku day VLC. Waxaad uga soo bixi kartaa goobta VLC .
Wixii kuwa loo isticmaalaa in ay media player hadda oo aan ahayn in xamaasad leh oo ku saabsan beddelo, intay qaadi karaan isticmaalka ciyaartoyda iyaga u gaar ah si ay u ciyaari files MOV sida Ayay naftaydu sida ay badalo faylasha MOV in qaab file taageeray hore. Waa maxay dheeraad ah, diinta file MOV waa doorashada ugu fiican ee lagu xallinayo arrimaha incompatibility oo dhan file MOV si users daawan kartaa videos MOV ay meel kasta.
Talaabada 1: Jiid-iyo-hoos u files MOV si toos ah u gal barnaamijka.
Talaabada 2: fur liiska saarka qaabka adigoo gujinaya qaab icon ee Qaabka Output Murayaad ka dibna dooran waxa aad rabto in aad sida qaab wax soo saarka.
Tallaabo 3: U beddelaan files MOV si aad u qaabab kale garaacida ka badalo button.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay files kale in sidoo kale aqlka oo jeclaan lahaa in iyaga ciyaaro ciyaaryahanka MOV aad sida QuickTime, barnaamijka ayaa sidoo kale kaa caawin karaan inaad iyaga loogu badalo in ay MOV ah, sida ka ah wmv soo gudbin si MOV ah .